Somaliland: Dhaqdhaaq military oo xoogan oo ka socda Tukaraq - Politics - Somali Forum - Somalia Online
By Suldaanka, June 1 in Politics
Somaliland oo saaka oo dhaq dhaqaaqyo cusub ka bilowday degaanka Tukaraq
Somaliland oo saaka oo dhaq dhaqaaqyo cusub ka bilowday degaanka Tukaraq | Caasimada Online
Hargeysa (Caasimada Online) – Wararka laga helayo gobolka Sool ee waqooyiga Soomaaliya ayaa sheegaya in saaka ciidamada Somaliland dhaq-dhaqaaqyo hor leh ay ka bilaabeen deegaanka Tukaraq oo …
Waxa laba todobaad ka hor isaga baxay deegaanka God Qaboobe ciidan beeleedyo halkaa ku sugnaa.
Waxay u badan in Somaliland hore u ruqaansanayso dhanka Buuro Wadal oo ah tuuladda ugu danbaysa inta aan xadka Somaliland iyo Somalia la gaadhin.
Waxaad qiyaastaa adigoo Australia jooga oo wax qabaw koob ku shubtay, iyo adigoo soo kor istaagay wiil tuutaha snm labisan, xuduud qabiil kale kusoo dhaawacmay, isbitaalkiina ka buuxsamay oo hooyadii geed hoostiis dhareerka uga tirayso, bal qiyaas labadaas intaad koobka miiska saarto.
Awoowe raggaa aad sheegtay xuduudka kusii jeeda, iska daa inay kusoo dhaawacmaan, inay dalkooda u dhintaan ayay u dhaarteen. Cid ku khasabtay ma jirto, waa waddanimo la is dheeryahay.
Bal wax ka dheh kuwa ka soo horjeeda ee sanad walba la sii durkinaayo, dhaawac iyo dhimasho u dheertay bahdilaad joogta ah. Ma odhan lahayd ayagoo bahdilaada jumlad u qaata oo isaga baxa hal mar dhulka-Somaliland, inta yar ee wali qacanta ku hayaan, ayaa ka haboon halka hada sanad walba u tahay inay dhabarka sii jeediyaan. Ileen ciidanka Qaranka Somaliland ilaa xadkiisa gaadho ka hadhi maaye.
Waxaan aad ugu faraxsanay in hablihii dalku ku dayanayaan example fiican ee raggoodii u hormoodka ka yahay oo hada ilaa heer Sarkaal ay gaadheen.
Ciidamadda Qaranka oo fadhiisin cusub ka samaystay Faleeryaale. Faleeryaale waa meel ay hore fadhiisin ugu ahayd maleeshyo beeleedka Garowe.
Shaki kuma jiro inay snm 5km horay u sii soconayso markastoo khilaaf dhex galo nadaamka puntlad.
Mida maxaad ka oran lahayd snm iyo ssc.
Waxaa ila fool-xun inaan arko nin darwiish ah oo soomaaliya cadaw ku sheegaya, aamus yar ka dibna snm ka sugaya inay u sacabiso,biyuhu markay dhuunta mar waayaan waa laguu yaabaa.
Hablaha quruxdoodu waa nabad iyo guri-samo been yaan lagu dhaarin tuutahana halaga bixiyo.
Awoowe Somaliland waa awooda in xadka ay tagto. Laakin intaa waxay xeerinaysa waa inaan dhiig badan ku daadan.
Ciidanka Qaranka Somaliland weerar maha. Waa ciidan oofinaaya amaradda dawladda, isagoo awood u leh inu cagta mariyo kuwa ka soo horjeeda ayuu hadana u dul qaata.
SSC aad sheegaysa bari hore ayay Somaliland ku biirtay kolkii Xagle Toosiye hogaaminaayay. Qoladii Khaatumona Professor Cali Galaydh Hargeysa ayuu jooga. Social media beenta iyo khiyaaliga laga yeedhiyo miyaa run mooday?
Tuuladda Buuhoodle waxay uga maqantay Somaliland waa dulqaadka reer Somaliland. Ciidanka Qaran ku jaho walba waa ka fadhiyaa, kolka laga reebo dhanka Ethiopia. Ku qaadan mayso nus-galin in gacanta lagu dhigo.
Ciidamo Somaliland ka socda ayaa la wareegay amniga deegaanka Horu-Fadhi oo laba beelood ku dirireen dhawaan.
Deegaanka Horufadhi ayaa u jirta Buuhoodle 15km.
Deg Deg Somaliland Oo Ku Duushay Horufadhi Kana Faa’iidaysatay Colaada Hagar iyo Hayaag | khaatumo news online